Shir looga hadlayay hubinta xogta Mashaariicda Bangiga Adduunka ka wado Puntland oo lagu qabtay Garoowe[Sawirro] – Wasaaradda Maaliyadda
Shir looga hadlayay hubinta xogta Mashaariicda Bangiga Adduunka ka wado Puntland oo lagu qabtay Garoowe[Sawirro]
October 5, 2020	in Warka
GAROOWE – Shirka bilaha ah ee ku aadan hubinta xogta mashaariicda Bangiga adduunka uu ka wado deegaanada Dawladda Puntland ayaa lagu qabtay xarunta Wasaaradda Maaliyadda ay ku leedahay magaalada Garoowe.
Kulankan waxaa shir Guddoominayay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dawladda Puntland Mudane Xasan Shire Cabdi, waxaana kasoo qaybgalay Guddoomiyaha Hay’adda Hanti-dhawrka Puntland, Agaasimaha guud ee Wasaaradda Maaliyadda, kuxigeenka Agaasimaha guud ee Dakhliga Wasaaradda Maaliyadda iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Dawladda.
Madaxa Xiriiriyaha Mashruuca Bangiga Adduunka iyo Wasaaradda Maaliyadda Cabdulqaadir Xaashi ayaa halkaasi ku soo bandhigay xog ku aadan mashaariicda socda iyo halka ay maryaan.
Kulankan ayaa ahaa mid aan muddo la qaban kaddib markii uu dalka saamayn wayn ku yeeshay xanuunka COVID-19 taasoo keentay in aan la isu imaan karin.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dawladda Puntland Mudane Xasan Shire Cabdi ayaa boggaadiyay habka ay u socdaan mashaariicda Bangiga aduunku ka wado Puntland.
Wasiirka Maaliyadda Dawladda Puntland Xasan Shire Cabdi oo shir guddoomiyay kulan muhiim ah[Sawirro]
Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo ku guuleysatay hirgelinta nidaamka Computerized ah [Sawirro]